Waa maxay hay'ad sirdoon?, Daraasad isbarbardhig ah - Diblomaasi
Waa maxay hay’ad sirdoon?, Daraasad isbarbardhig ah
Hay’ad sirdoon waa hay’ad dawladeed. Shaqadeedu waa aruurinta, falanqaynta, iyo adeegsiga macluumaadka si ay u taageerto dowladdeeda.
Waxaa jira laba qaybood, qaybta hore waa ururinta macluumaadka (si loo “basaaso”) dalal kale. Dhinaca kale waa in la daawado dadka ku sugan wadankii hooyo ee laga yaabo inay dhibaatooyin keenaan. Hawsha saddexaad waa in laga difaaco hay’adaha sirdoonka shisheeyaha ee ku sugan waddanka gudihiisa. Tan dambe waxaa lagu magacaabaa ka hortagga sirdoonka, waxaana badanaa sameeya hay’ad gaar ah.
Hay’adaha sirdoonka waxay dowladdahooda qaran usoo gudbiyaan macluumaadyo muhiim u ah amniga qaranka. Sida siraha macluumaadka xasaasiga ah, waxqabadyadooda iyo kuwa hay’adaha kale ee gobolka; Difaaca kahortaga dadaalada wakaaladaha kale ee sirdoonka qaranka (kahortaga sirdoonka).
Waxa ay hay’aduhu ogaadaan waxaa loo yaqaan “sirdoon”. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo fulinta sharciga, amniga, difaaca iyo siyaasadda arrimaha dibedda.
Hababka loo ururiyo macluumaadka mararka qaarkood waa qarsoodi (qarsoon yihiin) mararka qaarkoodna si furan ayey u furan yihiin. Habka qarsoodiga ah wuxuu noqon karaa inuu wax xado oo nuqulo dukumiintiyada sirta ah. Habka furan wuxuu noqon karaa in la akhriyo dhammaan shaqooyinka la daabacay ee ku saabsan arrin muhiim ah, oo la falanqeeyo. Waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa si furan loogu daabacay waddamada dimuqraadiga ah.
Si loo helo macluumaadka sirta ah, xog ururrayaasha waxay adeegsadaan basaasnimo, sida taleefannada, kombiyuutarada, cryptanalysis (jabinta nambarada), iwm.
Hay’ad sirdoon ayaa asal ahaan u shaqeysa sida habdhiska neerfaha ee qaab kasta oo difaaca qaran, kaas oo mas’uul ka ah quudinta macluumaadka muhiimka ah ee hay’adaha sharci fulinta iyo xoogagga hubaysan ee khataraha suurtagalka ah ee amniga qaranka. Waxay uruuriyaan, falanqeeyaan, oo ka faa’iideystaan macluumaad qarsoodi ah oo aaney heli karin dadka caadiga ahi si ay ugu gaaraan danahooda.
Hay’adahaani waxay uruuriyaan macluumaadka qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan basaasnimo, ururinta ama dhegeysiga, cryptanalysis, iyo habab kale oo kala duwan. Ku dhowaad ummad kasta waxay leedahay in ka badan hal adeeg oo sir ah oo hawlgal ah ama hay’ad basaasid ah.
Hay’ada Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka (HSNQ)
Hay’ada Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka (HSNQ) waa hay’adda sirdoonka qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxay fulisaa adeeg qarsoodi ah, sirdoon iyo howlo qarsoodi ah. Ujeedka ugu weyn ee NISA ayaa ah aruurinta Sirdoonka iyo ilaalinta danaha Qaranka Soomaaliyeed. Shaqada haayada waa in ay aqoonsato oo laga hortago khataraha ku soo wajahan gobolka iyo muwaadiniinteeda isla markaana la xoojiyo amniga iyo nabadgelyada dalka sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Hay’ada Xarunteeduna waa Muqdisho. NISA sidoo kale waxay si dhow isugu xiran yihiin ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxayna si joogto ah ula shaqeeyaan madaxweynaha.
Tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka, dadaal badan ayaa galay qeexidda “sirdoon”. Dadaalkaani wuxuu xitaa kiciyay waxa mararka qaar loogu yeero aragtida sirdoonka, taas oo lagu raadin karo rabitaanka Sherman Kent ee ah in qeexitaan dhab ah laga bixiyo barnaamijyada uu qabanaayo sirdoonka, taas oo ay hoos u dhigeen dhaqanka sayniska bulshada ee caadiga ah.
Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka Kent wuxuu ka shaqeeyay Xafiiska Falanqaynta iyo Qiyaasaha Xafiiska Adeegyada Istaraatiijiyadeed ee Mareykanka, wuxuuna markii dambe madax ka noqday Xafiiska Qiyaasta Qaranka ee Hay’adda Sirdoonka Mareykanka (CIA). Ku dhawaad ​​dhammaan aragtiyada sirdoonka waxaa loo tixgelin karaa inay hoos tagto mudane Kent. Aragtida uu ka qabo in sirdoonku noqdo edbin gorfayneed oo sal ballaaran leh ayaa ku jirta uguna sarraysa “garaadku waa aqoon,” taas oo dejisay tusaalaha doodda dambe.
Tan iyo maalintii Kent, habab badan oo kale oo lagu beddeli karo sirdoonka waxaa soo jeediyay qoraayaal is xigxigay. Awooddiisa Sirdoonka ee 1996 ee Nabadda iyo Dagaalka, aqoonyahanka Ingiriiska iyo sarkaalkii hore ee sirdoonka Michael Herman waxay isku dayeen inay soo bandhigaan fikradaha kala duwan ee sirdoonka sida kala duwanaanshaha, laga bilaabo qeexitaannada ballaaran ee u wajahaya sirdoonka ugu horrayn “falanqaynta ilaha oo dhan” (oo ay astaan ​​u tahay Kent) si loo yareeyo fasiraadaha diiradda saaraya ururinta sirdoonka, gaar ahaan ururinta qarsoon.
Herman wuxuu xusayaa gudbinta ah in fasiraadaha ballaaran ay u janjeeraan qorayaasha Mareykanka iyo habab ciriiri ah oo Ingiriisku leeyahay. Waxa Herman uusan raadinin, si kastaba ha ahaatee, waa kala duwanaanshaha asaasiga ah ee arrintan qeexidda saamaynta ay ku yeelanayso hababka Ingiriiska iyo Mareykanka ee sirdoonka iyo sida kala duwanaanshaha fikradahaas ay uga dhex muuqdeen hay’addooda sirdoonka iyo sharci ahaan.
Guud ahaan waa suurtogal in marka hore la iswaydiiyo “waa maxay caqliga?” waxaa laga yaabaa in aan garaacno geed aqooneed qaldan. Su’aalaha dhabta ah waxaa laga yaabaa inay noqdaan “Sidee dalal iyo hay’ado kala duwan u qeexaan sirdoonka?” iyo “Waa maxay cawaaqibta qeexitaannadaas kala duwan?”
Daraasad Isbarbardhig ah
Kala duwanaanshaha fikirka ee fikradda sirdoonka ayaa si gaar ah mudan in maskaxda lagu hayo marka la barbardhigo Ingiriiska iyo Mareykanka. Guddigii Golaha Aspin/Brown ee 1995 ayaa baaray mashiinnada sirdoonka qaranka Ingiriiska. Sidoo kale, mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu horreeyay ee Guddiga Sirdoonka iyo Amniga ee Baarlamaanka Ingiriiska ka dib markii lagu abuuray Xeerka Adeegyada Sirdoonka ee 1994 wuxuu ahaa qiimeyn la mid ah hababka Mareykanka. Labada dhinac midna ma helin wax ay ku daraan hababka kan kale, walina midkoodna uma muuqan inuu ogaaday – waxaana soo baxay waxyaalo gabi ahaanba ka duwan markay ka hadlayeen sirdoonka. Si aad u ballaaran, wada-hadallada ku-meel-gaarka ah ee mawduuca sirdoonka waxay u egtahay in lagu sameeyo ujeeddooyin is-dhaafsi ah.
Adeegsiga hadda jira, “sirdoonka” ee ku hadla afka Maraykanka waxay u badan tahay inay tixraacdo sirdoonka “dhammaaday” ee la mariyey geeddi-socodka falanqaynta ilaha oo dhan oo loo beddelay talo-bixin iyo ikhtiyaarro u leh go’aamiyayaasha. Waxaa laga yaabaa in qeexitaanka caadiga ah ee Mareykanka uu ka yimid daabacaaddii hore ee Qaamuuska Shuruudaha Militariga Mareykanka ee Isticmaalka Wadajirka ah, kaas oo sheegaya in sirdoonku yahay “badeecadda ka dhalatay ururinta, qiimeynta, falanqaynta, is -dhexgalka, iyo fasiraadda dhammaan macluumaadka la heli karo ee quseeya hal ama dhinacyo badan oo ka mid ah waddamada shisheeye ama aagagga hawlgalka kuwaas oo isla markiiba ama suuragal ah inay muhiim u yihiin qorshaynta.
“Qeexitaankan waxaa ka mid ah ururinta macluumaad, laakiin natiijada kama dambaysta ah ma noqonayso “garaad” ilaa inta si fiican loogu lafa-gurayo. Sidaa darteed, marka la fiiriyo macnaha Mareykanka, wax-soo -saarka sirdoonka micnaheedu waa wax soo saarka gorfeynta.
Related Topics:Waa maxay hay'ad sirdoon?
Waa maxay milatari?
Warbixin qarsoodi ah oo ay soo saartay QM ayaa lagu sheegay in Blackwater ay isku dayday inay afgembiso dowladda Liibiya